Man Down System amin'ny alàlan'ny indostria (A10005) - Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia zokiolona
Ny mpiasa lery dia olona miasa irery tsy misy fanaraha-maso akaiky na mivantana. Noho izany, raha tsy misy mpanampy mivantana dia miatrika ratra mety mamono olona tsy miasa izy raha tsy omena fanampiana haingana. Ny fiarovana ny mpiasa irery dia tena zava-dehibe amin'ny sehatra toa ny Fambolena, Fitrandrahana, Fanamboarana, Famokarana, Elektronika, solika ary entona, Fanadiovana Saniterena, Fitantanam-bola sy Fiantohana, ary serivisy trano sy trano. Ny sehatra tsirairay dia samy manana ny atiny manokana miaraka amin'ny mpiasa irery. Izay no antony maha-zava-dehibe ny fahazoana ireo karazana risika samihafa misy eo amin'ny sehatra tsirairay sy inona ny vahaolana ampiasain'ny sehatra tsirairay hiatrehana ireo olana ireo.
Ny indostria tsirairay dia tompon'andraikitra eo ambanin'ny lalàna hanomezana fiarovana sy filaminana ho an'ny mpiasa lery. Eto amin'ity lahatsoratra ity, hiresaka momba ny risika mahazatra indrindra atrehin'ny mpiasan'ny indostria izahay ary izay azon'ny fitantanana atao mba hanalefahana ireo loza mety hitranga ireo.
Raha mahita ny fambolena isika dia misy ny tanimboly ary misy mpiasa maro, na izany aza, ny ankabeazan'ny ankamaroan'ny olona miasa irery any amin'ny faritra lavitra. Noho ny fidiran'ny milina mavesatra, ny biby goavambe sy ny miasa miaraka amin'ny tanana dia mampitombo ny risika amin'ny ratra. Any amin'ny fambolena any Angletera dia 18 heny avo noho ny hafa. Noho izany, miteraka toe-javatra manaitra ny sehatry ny fambolena manerana izao tontolo izao mba handraisana fepetra izay hampihenana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny mpiasa lone miasa amin'ny sehatry ny fambolena.
Ny fitantanana dia mety mampihena ny risika amin'ny alàlan'ny fanofanana tsy tapaka izay ahafahan'izy ireo milaza azy ireo ny fomba fampiasana milina mavesatra, Handel biby goavambe ary hampiasa fonon-tanana rehefa mampiasa miasa amin'ny tanana. Tahaka izany koa, amin'ny fanombanana ny loza dia azon'izy ireo atao ny mampiasa ny famakafakana PET izay misy ny loza mety hitranga amin'ny olona, ​​ny tontolo iainana ary ny asa amin'ny alàlan'ny ahafahany manombatombana ny fototry ny hetsika tsirairay ataon'ny mpiasa lone. Ankoatr'izay amin'ity vanim-potoana teknolojia ity dia afaka mampiditra fiara sy fitaovana vaovao izay mety hampihena ny mety hiseho miaraka amin'ny fomba sy fitaovana nentim-paharazana. Farany, ny fitantanana dia afaka mamaritra ny fakana fiara azo antoka amin'ny alàlan'ny mpiasa irery izay mety manampy azy ireo any amin'ny faritra lavitra.
Ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany dia iray amin'ireo indostria riskiest indrindra eto an-tany. Aiza no avo ny tahan'ny fahafatesan'ny mpiasa sy ny mpiasa. Ny antontan'isan'ny governemanta sinoa dia manondro fa mpitrandraka sinoa 5000 maty amin'ny lozam-pifamoivoizana isan-taona. Mitohy manerantany ny trangam-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ao anatin'izany ny lozam-pifamoivoizana izay namoizana ain'olona am-polony maro tamin'ny fotoana iray toy ny loza nitranga tany amin'ny toeram-pitrandrahana Ulyanovsk tamin'ny taona 2007. Ireo antontanisa fohy etsy ambony dia mampiseho fa ny fiarovana dia efa ahiahy hatry ny ela tamin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany. Ny olona dia mijaly mafy any ambanin'ny tany (fitrandrahana ambanin'ny tany) noho ny fitrandrahana amin'ny tany. miatrika loza maro ny asan'ny tsirairay rehefa miasa toy ny fofokaina ny vovoka arina izay mahatonga azy ireo ho sarotra rehefa miaina, aretin'ny havokavoka, fikolokoloana ny vatan'ny havokavoka, izay mety hiteraka olana ara-pisefoana mitohy. ary miteraka olana ara-pahasalamana maro, loza hafa atrehin'izy ireo toy ny tabataban'ny masinina, ny fipoahana izay misy fiatraikany amin'ny fahaizany mandre, ny fihoaram-pefy amin'ny tabataba be loatra dia mety hiteraka tinnitus (maneno amin'ny sofina), fikorontanana amin'ny torimaso, olana mifantoka na dia indraindray aza ny fahaverezan'ny fihainoana maharitra sy ny simika. entona, hafanana ambonimbony, fikorianan'ny ôksizenina voafetra. Loza lehibe iray hafa koa ny vibration amin'ny vatana iray manontolo (wbv) dia loza mitatao miadana izay miseho matetika amin'ireo mpiasa mpitrandraka izay miasa amin'ny milina mavesatra. Ilaina ny mety hitranga amin'ny fihoaram-pefy amin'ny tara-pahazavana ultraviolet amin'ny tara-masoandro. ny famoahana tafahoatra ny UV dia mety miteraka homamiadan'ny hoditra.
Ny fitantanana dia tokony hampiditra drafi-pifehezana vovoka sy mpanara-maso, na ny fitantanana ambony dia tokony hiantoka fa ny rafitra mifehy ny vovoka dia miasa tsara na tsia. tokony hanofana azy ireo isika amin'ny fomba fitantanana ny tsy fihoaram-pefy amin'ny vovoka arintany. Inona no fepetra tokony hitranga mandritra ny famoretana tanteraka ny vovoka arintany. Ny fiarovana amin'ny tahiry dia tokony ampiasaina rehefa apetraka sy miaro na amboarina ny fiarovana ny vovoka. Ny valim-pitsaboana sy ny fanaraha-maso ihany koa dia ilaina. Ho fiarovana ny mpiasan'izy ireo amin'ny tabataba, ny dingana fitantanana dia tsy maintsy manao izany aloha fa manombatombana ny fisian'ny tabatabam-peo amin'ny alàlan'ny fanombanana ny loza. Azon'izy ireo mampiasa dampenera vovoka ary takelaka mampihetsi-po hifehezana ny fipoahana dia mitranga eo amin'ny tontolon'ny miasa. Ny fikojakojana matetika sy ny fanombanana ny milina mavesatra dia zava-dehibe ihany koa hampihena ny loza ateraky ny tabataba. Ny mpiasa dia tokony hampiasa fitaovana fiarovana amin'ny tabataba izay manampy azy ireo hampihena ny loza ateraky ny tabataba. Ho an'ny fitantanana mangatsiaka amin'ny vatana manontolo dia tokony hampihena ny fandaharam-potoanan'ny mpiasa, ny famindram-pitantanana dia tokony hamolavola fandaharam-potoana hiasa ho an'ny mpiasa, ny torolàlana momba ny asa sy ny fampiofanana dia tena manakiana mafy an'io asa io, ny fisavana ara-pahasalamana tsy tapaka ary ny fanaraha-maso akaiky ny fanaintainana aoriana dia mety hampihena io loza mampidi-doza io.
Ny fitantanana dia tokony hanao fanombanana ny risika amin'ny fandaharam-potoana ivelan'ny asa any ivelany mba hanampiana amin'ny famolavolana fepetra fiarovana amin'ny masoandro.
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fampihenana ny fihanaky ny UV dia ny fampiasana mitambatra fomba fiarovana, tsy afaka miantehitra amin'ny fomba tsotra isika, tokony hampiasa fomba fiarovana toy ny fampidirina indray ny asa hialana amin'ny fiakaran'ny UV amin'ny andro, manome voajanahary na artifisialy alokaloka-manome akanjo fiarovan-tena mety, ary mampihatra sunscreen.
Ny sehatry ny famokarana dia mirotsaka amin'ny fanodinana ireo akora mivoaka ho entana. Ny sehatry ny famokarana dia ahitana ny fivarotam-panafody, sakafo, fiara, lamba, ary orinasa hafa mifandraika amin'izany. Tahaka ny sehatra hafa eto amin'ny sehatry ny famokarana dia misy sehatra maro izay ilain'izy ireo mpiasa irery toa ny fikolokoloana sy fanamboarana. Rehefa tsy hita ny mpiasa iray dia miakatra ny risika mifandray amin'ny mpiasa irery. Ny milina mavesatra no antony lehibe mifandraika amin'ny ratra amin'ny sehatry ny famokarana, etsy ankilany, ireo mpiasa loka dia tsy afaka mifampiresaka mba hahazo fanampiana amin'ny toe-javatra mampidi-doza.
Ny fitantanana dia ahafahana mamantatra ireo mpiasa mitoka-monina rehetra amin'ny sehatry ny famokarana ary avy eo manao ny fanombanana ny risika misy ifandraisany amin'ny asan'ny mpiasa tsirairay. Rehefa avy nanao fanombanana ny risika izy ireo dia afaka mamorona politika momba ny fiarovana ny mpiasa irery. Ankoatra ireo mpiasa dia afaka mitondra fanairana miaraka amin'izy ireo rehefa handeha amin'ny toerana lavitra izy ireo. Toy izany koa, izy ireo dia afaka mitandrina kokoa rehefa mampiasa fitaovana. Ny fikambanan'ny fikambanana dia afaka manome azy ireo fitaovana fiarovana ho an'ny tena manokana izay mety hampihena ny loza mety hitranga amin'ny mpiasa irery.
Indostrian'ny solika sy ny entona
Raha mahita ny vidin'ny solika sy ny entona manerantany isika dia ambany noho ny teo aloha, dia voafetra ny teti-bolan'ny fandaminana, na izany aza, tsy afaka mampandefitra ny fiarovana ny mpiasa irery isika. Ny tranokala fitrandrahana solika sy entona dia any amin'ny faritra lavitra izay sarotra ny mitazona ny fifandraisany amin'ny mpiasa loka.Doa tsy hita maso sy tsy olana amin'ny olana eo amin'ny sehatry ny solika sy ny entona izay miteraka risika marobe. Ny loza mety hitranga indrindra amin'ny mpiasan'ny solika ao amin'ny indostrian'ny solika sy ny solika dia mihintsana sy mianjera, nianjera, nianjera ary nandoro ary nitohy hatrany ny fitrandrahana entona. Ny risika dia mety hiteraka toe-javatra mampidi-doza izay ilaina ny famaliana haingana.
Ny vahaolana ho an'ny indostrian'ny solika sy gazy dia ny fampiasana fitaovana maoderina vaovao toy ny rafitra ihelp-man down izay rafitra GPS GPS kely indrindra manara-maso. Ny mpiasa irery dia afaka manindry ny bokotra rehefa mahatsapa loza izy na hafatra mandeha ho azy no halefa amin'ny toerana rehefa milatsaka noho ny toe-javatra rehetra. Ny fepetra hafa dia mety amin'ny fampiasana fitaovana fiarovana toy ny sarontava, fonon-tànana ary fitaovana hafa hahazoana antoka fa azo antoka ara-batana.
Ity sehatra ity no tena atahorana rehefa tratran'ny mpiasa very saina izy ireo, satria ireo olona ireo dia manana fampahafantarana mivantana amin'ny herinaratra ary ny mazàna miasa amin'ny mpiasa an-trano ao amin'ity sehatra ity dia mihoatra ny adiny iray ka noho io fotoana io dia misy ny tsy fahombiazana mety hitranga vokany ratsy. Eo ihany koa ny mety ho fatiantoka raha nisy ny zavatra nitranga ary tsy noraisina haingana ny fepetra. Loza hafa azon'izy ireo atrehin'izy ireo indraindray fa mihintsan-doha herinaratra izy ireo rehefa miasa amin'ny tilikambo, any amin'ny toerana avo noho izany dia mety hianjera amin'ny tany izy ireo ary mahazo ratra mafy.
Noho izany, ny fikambanana dia manana ireo mpiasa very lahatra ireo izay voaofana tsara. Raha toa izy ireo dia tokony hanana drafitra mifanohitra amin'izay tokony hataon'ny mpiasa irery raha sendra sendra mampidi-doza izy. Tokony hiasa eo amin'ny mpivady koa izy ireo. Afaka mampiasa fehikibo azo antoka izy ireo rehefa manao ny asa any amin'ny toerana avo na afaka mampiasa ny rafi-pitondran-tena izay hanampy ny mpitantana hanao fanairana haingana rehefa misy mpiasa latsaka mianjera eny an-tampon'ny tranokala ambony.
Ny indostrian'ny fananganana dia eo amin'ireo indostria izay mitombo haingana noho ny fitomboan'ny isan'ny mponina sy ny fanatontoloana an'izao tontolo izao. Ny indostrian'ny fananganana dia misy ny fananganana tranobe, làlana, trano, hopitaly, toeram-piasana, toeram-pivarotana sns ... Fa ny loza dia miatrika mpiasa irery rehefa miasa amin'ny haavo izy, ny tabataba avy amin'ny fitaovana, ny milina mavesatra dia avo kokoa noho ny asa fanamboarana hafa. Ny lozam-pifamoivoizana sy ny loza ateraky ny mpiasa irery amin'ny tranokala dia ny, fianjerana sy solafaka, tratra eo anelanelan'ny zavatra, nianjera avy eo ambonin'ilay zavatra, faritra miasa tsy marin-toerana, solafaka na nianjera avy amin'ny tohatra tohatra, tohina herinaratra, ratra teo amin'ny lohany, nianjera avy tamin'ny milina mavesatra vanozy toy izany, na eo am-pamoahana sy amin'ny famoahana milina mavesatra avy amin'ny zavatra iray mankany amin'ny iray hafa, fanofanana sy fanaraha-maso diso indraindray ny mpiasa irery dia miasa any amin'ny faritra lavitra ka noho ny fifandraisana tsy mandaitra dia tsy afaka nifandray tamin'ny ekipany izy ireo.
Ho an'ny fampihenana ireo fitantanana loza ireo dia tokony hampifandray ny fiarovana ho ampahan'ny drafitra, voalohany dia tokony hanome fiofanana sy fiofanana sahaza ho an'ny foreman sy ny mpanara-maso izy ireo avy eo, dia hitarika ireo mpiasa mitokana miasa irery amin'ny faritra lavitra tsy misy fanampiana avy amin'ny ambaratonga ambony amin'ny fitantanana. Tsy maintsy mampiditra rafi-piarovana izy ireo & fiarovana amin'ny loha mba hampihena ny fahafatesan'olona sy ratra mafy mandritra ny asa. Ho an'ny mpitantana mpiasa irery dia tsy maintsy omena fiofanana momba ny fiarovana izy ireo ary asehoy azy ireo ny fampisehoana ny fomba fampiasana fitaovana sy milina mety. Foreman na mpanara-maso dia tokony hanao tombana amin'ny tranonkala alohan'ny hanombohana asa. Fanaraha-maso araka ny tokony ho izy ny fiarovana sy ny fizahana fitaovana sy fitaovana tsy tapaka.
Ny mpiasa irery dia miasa any amin'ny toerana lavitra dia tokony hanome marika fampisehoana mety, ka tsy mahatsapa sakana rehefa miasa izy. Ho an'ny fifandraisana mahomby, ny fitantanana dia afaka mampiasa telefaona an-tariby na fitaovana elektronika. Azon'izy ireo atao koa ny mampiasa robots ho an'ny asa samihafa mba hampihenana ny ratra amin'ny asa very sy ny isan'ny maty.
Sehatra ara-bola sy fiantohana:
Tsy toy ny sehatra hafa amin'ny sehatry ny fitantanam-bola sy fiantohana, ny tahan'ny mpiasa irery dia avo noho ny indostria hafa. Amin'ny sehatry ny banky sy fiantohana matetika, ny mpiasa mitokana dia solontenan'ny varotra sy tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana. Ireo izay miasa ivelan'ny banky dia manandrana manatona ny mpanjifa amin'ny tanjona samihafa. Tahaka ilay olona izay mangataka vola amin'ny trosa na fiantohana, satria be vola be izy ireo, vitsy ny sain-dratsy mety hanimba mpiasa irery izay mety mitaky fatiantoka ara-bola ary mety hampidi-doza an'ireo mpiasa irery ihany koa. Ireo mpiasa irery ao amin'ny sehatry ny fitantanam-bola sy fiantohana dia mety hijaly noho ny hafanana, olana amin'ny tsy fahampian-drano amin'ny toetr'andro mafana.
Noho izany, ny fitantanana dia afaka mandeha amin'ny GPS fanaraha-maso izay hanampy ny mpitantana hamantatra ny lone mpiasa. Noho ny fanaovana ny orinasa mpampiasa azy ireo mora foana dia afaka manome azy ireo fiara noforonina tamin'ny fomba mora miaro azy ireo amin'ny masoandro amin'ny andro mafana. Ny fandaminana ny asa indray mba hisorohana ny loza ara-pahasalamana, manome hazavana voajanahary sy artifisialy ary manao fampiharana sunscreen.
Indostrian'ny trano trano:
Ny toetoetran'ny indostrian'ny trano sy ny orinasa izay miasa irery; any amin'ireo mpandraharaha no mandeha miaraka amin'ny mpividy na mpivarotra fananana, tsy fantatrao izay hitanao ambadiky ny varavarana ary misy tranga mety handratra azy ara-batana. Ankoatr'izay, ny mpandraharaha dia ny ankamaroan'ny fotoana dia mahazo vola be izay mety hiteraka olana rehefa misy olona mahafantatra ny vola. Amin'ny indostrian'ny trano sy ny trano fonenana, ny mpiasa irery dia tsy manana fampahalalana marina momba ny toerana misy ny tsena, ny vidiny, ny fangatahana ary ny lanjan'ny bungalow, trano fisaka ary ny faritra ara-barotra. Ny asan'ny mpiasa miasa amin'ny indostrian'ny trano dia ny ankamaroan'ny mitsidika ny sahan'ny mpiasa iray.
Noho izany, toy ny sehatra hafa dia toy ny fanaraha-maso GPS, mitondra fiara na dia solika azo antoka aza, mitondra fitaovam-piarovana miaraka aminao foana. Ankoatra izany tsy mizara ny mombamomba anao amin'ireo mpanjifanao ary miezaha hihaona amin'ny mpanjifanao eny imasom-bahoaka. Ny fitantanana dia tsy maintsy manome fampahalalana marina momba ny tsena, ny sanda ary ny salan'isa amin'ny tranokala samihafa mba tsy hisalasala ny mpiasa irery raha toa ka manolotra ireo mpanjifany ary manolotra fampisehoana miaraka amin'ny tena zava-misy sy ny tarehimarika. Ho an'ny fitantanana mpiasa irery dia tokony hanome fepetra fiarovana toy ny fampiharana sunscreen, arovy ny mpiasa lone amin'ny alokaloka na artifisialy na manao fiovana vitsivitsy amin'ny fandaharam-potoana mba hiarovana ny tenany amin'ny mpiasa mafana.
Serivisy iasan'ny mpiasa ny manafoana ny fakon'olom-bitsy ary manala ireo fako ho fanodinana na fanariam-pako. Ny adidin'ny mpiasa ara-pahasalamana manara-maso ny rafitry ny tatatra ary manala ny sakanana rehetra, ny hazondamosina na ny fahasimbana. irery mpiasa afaka miatrika loza toy ny fiparitahan'ny entona manimba; metana, Hidrôdiôma sulfida. Ireo mpiasa mitoka-monina tratry ny aretina maro rehefa miasa toy ny hépatite, olan'ny hoditra. Ny fanapahana, ny ratra, ny ratra manindrona no loza mitatao hatrehin'izy ireo mahatsiravina. Mitombo ny loza ateraky ny mpiasa irery rehefa miasa any ambanin'ny tany amin'ny fantsom-pifandraisana samihafa izy ireo, miatrika olana toy ny fisefoana, hidrogen, tsy fahampian'ny hazavana, loharanom-bola voafetra izy ireo. Ny tena atahorana dia ny maratra amin'ny bibikely isan-karazany mandritra ny asa. Tsy manasa tanana araka ny tokony ho izy izy ireo aorian'ny fanatanterahana ny adidiny noho ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena sy ny fahalalana
Ny tompon'andraikitra dia tokony handraisana fepetra ara-pitsaboana amin'ny fototry ara-pitsaboana mahazatra mba hahitana ny aretina ara-pahasalamana na ny olana amin'ny mpiasa irery. Ny mpiasa irery dia tsy maintsy manome fitafiana, fonon-tànana ary kiraro, mba hamonjena ny tenany amin'ny fahatapahana, fikapohana ary fikapohana ratra. Manomeza saron-tava sy fanilo mety izy ireo hanatontosany ny asany araka ny tokony ho izy. Ny fanentanana sy ny fanabeazana tsara dia tsy maintsy omena mpiasa manirery. Ampianaro izy ireo ny fomba fanadiovana tanana rehefa avy mamita asa mba hahafahany miaro amin'ny tenany amin'ny aretina isan-karazany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka fohifohy momba ireo seha-pihariana lehibe voakasiky ny olan'ny mpiasa irery isika, noho izany, nanolotra ny vahaolana amin'ny sehatra tsirairay izahay. Amin'ny fampiharana ireo vahaolana etsy ambony sy fampifangaroana ireo vahaolana ireo ho ampahany amin'ny drafitra, ny fitantanana dia afaka mampihena ireo loza ireo ary mampitombo ny fahombiazan'ny mpiasa irery. Ny fahombiazan'ny fikambanana dia miankina tanteraka amin'ny fahombiazan'ny mpiasa indrindra ny mpiasa mitokana; raha nanamora ny mpiasa irery ny fikambanana dia afaka mahatratra ny tanjona kendreny sy ny tanjona tadiavina izy ireo.
4424 Total Views 10 Views Today